पानी कमीले शरीरमा के समस्या हुन्छ ? जान्नुहोस् | NepalDut
पानी कमीले शरीरमा के समस्या हुन्छ ? जान्नुहोस्
शरीर चिसो हुन्छ: पानीले शरीरमा तातो बनाइ राख्न ठूलो सहयोग गर्छ। रगतमा हुने पानीले शरीरमा तातोपना कायम राखिराख्न र तापक्रम मिलाएर राख्न मद्दत गर्छ। पानीको मात्रा कम हुँदा तातोपानी बाहिर जाने हुँदा शरीर चिसो हुन्छ। पानीको मात्रा कम हुँदा मासंपेशीमा मात्र नभई मस्तिस्कमा पनि रक्तसञ्चार कम हुन्छ। जसले गर्दा आँखाको दृष्टि धमिलो हुने, तिर्मिराउने तथा काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ।
श्वास गन्हाउने : पानी कम खानुको अर्को समस्या हो श्वास गराउने हुन्छ।